अब के प्रमाण चाहियाे प्रशासनलाई ? पहिलो नागरिकता किन, रद्द गर्दैनन् प्रजिअ ! « Khabar24Nepal
अब के प्रमाण चाहियाे प्रशासनलाई ? पहिलो नागरिकता किन, रद्द गर्दैनन् प्रजिअ !
फाल्गुन २३, काठमाडौ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले सत्ता चलाएको एक बर्ष पूरा भयाे। जनताले मत दिएर पठाएपछि, देशले थरीथरीका जनप्रतिनिधि समेत पायाे। एक बर्षकाे अबधिमा देशकै सबैभन्दा विवादित गाउँपालिका अध्यक्ष वीर बहादुर केसी हुन्।
केसी संग फरक-फरक नाममा, दुईवटा नागरिकता रहेको समेत पुष्टि भएकाे छ। वीर बहादुर केसी र भिउदे खत्रीका नाममा, उनका नागरिकता रहेको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले दुवै नागरिकता एउटै व्यक्तिको रहेको पुष्टि गरेको छ। फर्जी नामकाे नागरिकताकाे पुष्टि संगै पत्रकार जीवन डाँगीले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका छन्।
उनी लेख्छन् : “सुकिदह अर्थात् गंगादेब स्थानीय सरकारका प्रधानमन्त्री वीर बहादुर केसी: भिउदे खत्री बन्नु भएकोमा मज्जा सहितकाे गज्जप बधाई।” “तपाईं भिउदे हाे, भन्ने राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले दुवै नागरिकता एउटै व्यक्तिको रहेको पुष्टि गरेको रोल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।” पत्रकार डाँगीले उक्त टिप्पणीमा जनताले राम्रो जनप्रतिनिधि छान्न नसक्दा धेरै दुख भाेग्नु परेको उल्लेख गरेका छन्। “जनताले गाेबर र अन्य चिज नछुट्याउदा यत्राे महाभारत देख्नुपर्याे। कानुन विपरीत अपराधीक कार्य गर्ने तपाईंलाई, याे सरकारले कारबाही गर्छ या गर्दैन, याे भने देख्न बाँकी छ।” उनकै टिप्पणीमा छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय राेल्पाले दुईवटा नागरिकता पुष्टि भएपछि, वीर बहादुर केसी नामक नागरिकता रद्द नगरेको बताए।
उनले भने: “प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि तत्कालीन माओबादी नेताकाे प्रलोभनमा परे।” उनले थपे- “सत्य कुरा लुकाउन खाेज्ने जाे काेहिलाई पनि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने तर्क गरे।” उनले सुरुवाती चरणकाे एक प्रसंग पनि जाेडेका छन्: “खुसि लाग्याे हरिबहादुर पुन दाइ, तपाई नै नेता हाे। तपाईंले तत्कालीन माओबादीका ४ हजार केन्द्रीय सदस्य भित्रका एक पात्र तथा राेल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमरेड डिजन भट्टराईबाट सत्य कुराकाे प्रमाण खाेज्दा धेरै कष्ट भाेग्नुभयाे।” सत्य कुरा लुक्दैन । लुकाउनु पनि हुदैन।
दाङमा भुकम्पको धक्का बझाङलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ५.७ रेक्टरको भूकम्प
सामलिङको आइपीओ बाँडफाँट, २१ लाख २० हजारको हात खाली